~ ဏီလင်းညို ~: ဆန်းကြယ်...
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 8:13 PM
ဏီလင်းညိုရဲ့ ပိုစ့်တချို့ကို ဖတ်ဖူးခဲ့ပေမယ့် ကွန်မန့် တခါမှ မရေးဘူးသေးဖူး။
နန္ဒာ ချစ်တဲ့ စာရေး ၊ ကဗျာရေးကောင်းတဲ့ မလေး (အိမ်ချမ်းမြေ့) ဆီကနေ "ဏီလင်းညို" ဆိုတဲ့ နာမည်ကို စရင်းနှီးခဲ့ဖူးတာပါ။
လူတွေ အားလုံးဟာ စိတ်ခြင်း မတူသလို အဲလို မတူတဲ့ စိတ်တွေ အားလုံးဟာလဲ ဆန်းကြယ်လွန်းလှတယ်။
ဏီလင်းညို ကြုံခဲ့တဲ့ အဖြစ်က သနားစရာ ကောင်းသလိုလိုနဲ့ ပိုစ့်ဖတ်လို့ အပြီးမှာ နန္ဒာ ရီဖြစ်လိုက်မိတယ်။ :)
အဲဒီအတွက် စာရေးသူ ဏီလင်းညို ရင်းလိုက်ရတဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက်ဘူးလေးနဲ့ ပိုစ့်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးလိုက်တဲ့ အချိန်တွေ အတွက် တန်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါရဲ့လေ။
ရှေးလူကြီးတွေ ပြောတာ ရှိပါတယ်။ အကုသိုလ်ဆိုတာ အဖ်ါနဲ့လာတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဒါနဲ့ ထမင်းမမကျက်တာ၊ ခေါက်ဆွဲထုပ် ဒိတ်လွန်နေတာကို ဆိုင်ရှင်ကို ပြန်သွားပြောပြီး လဲလို့မရဘူးလား။ လဲလို့မရရင်တောင်မှ အဲဒါပြောပြဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အော်စီမှာဆို ဒီလို ဖြစ်ရင် တရားတောင်စွဲလို့ရတယ်။
လွဲပြီးရင်း လွဲနိုင်လွန်းပါတယ်၊ ကြက်ဖ ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလိုဖြစ်နေတယ်၊
လွဲလွန်းတော့ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေလို့ ပြုံးမိတယ်။
ဒီလို အဆင်မပြေမှုတွေ ခဏခဏ ကြုံဖူးလို့ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ပြီးတော့ ခေါက်ဆွဲခြောက်စားခြင်းရဲ့ခံစားချက်ကလည်း ထပ်တူကျပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ..နေတတ်သလို နေထိုင်သွားပါလို့ပဲ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
အသစ် မတင်လို့ စောင့်နေတာဗျ။
တချို့ကိစ္စတွေမှာ အဆင်မပြေချင်ရင် ဆက်တိုက်၊ ကံကောင်းချင်ရင်လည်း ဆက်တိုက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျ။ ဒီပို့စ်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ အခုတလော ကိုလင်းညိုတစ်ယောက် အလုပ်ပင်ပန်းပြီး motivation ကျနေတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်...Take Care, Bro!!
“စိတ်” ဆိုတာ “ဆန်းကြယ်”
တစ်ချို့ဆိုင်တွေက အစားအသောက်တွေ ဝယ်စားရင်လည်း သူတို့ လုပ်နေတာ မမြင်ရရင်သာ ကောင်းတာ.. မြင်သွားရင်တော့ စားချင်စိတ် မရှိတော့သလိုပေါ့...။
အမေ့အိမ် မဟုတ်တော့လည်း အစားအသောက်က ဒီလိုပဲပေါ့.. အဆင်ပြေတလှည့် မပြေတလည့်..။
"Ignorance is Bliss" တဲ့ ကိုလင်းညို..။ အဲ့ဒါကို နန္ဒာသိန်းဇံကတော့ "မသိတာ ကောင်းတယ်" လို့ ဘာသာပြန်ထားပါတယ် ။ ဟုတ်တယ်.. တခါတခါမှာ ၊ တချို့ အရာတွေက မသိတာ ကောင်းတယ် ကိုလင်းညို .. ။ သိလိုက်ရမှ စောစောက ခေါက်ဆွဲဘူးလေး လွင့်ပစ်လိုက်ရသလိုမျိုး အရသာရှိမှု တချို့ ပျောက်ဆုံးသွားတတ်တယ်လေ....... ။
လူ့သဘာဝပါပဲ ။ ဒီလိုမျိုးတွေ ကြုံခဲ့ဖူးတယ်။
မသိစိတ်ကို လှည့်စားနိင် စေစားနိင်တဲ့ တစ်နေ့ ရောက်ခဲ့ရင် တော့ စားလို့ကုန်တဲ့အထိ ကောင်းနေမယ်လို့ ခံစားလာရမှာပါ။
ပထမပိုင်းမှာ စားလို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကို အမိအရ ဖမ်းဆုပ်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုး။ နောက်ထပ်ဘယ်လို အခြေအနေ ကြုံကြုံ ပထမ ရရှိထားတဲ့ ခံစားချက်ကို မကျော်လွန် စေရတာမျိုးပေါ့။
အောင်မာလေးးးးးးးးးး ငါ့အစ်ကိုဂျီးကလည်း ရှက်ကိုရှက်ကန်းများ ဖြစ်နေရသေးတယ်...သုံးပုံနှစ်ပုံတောင် စားပြီးသွားပြီပဲဟာ...ကျန်တဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကို ဆက်စားလိုက်ရောပေါ့...တစ်ခုခုဖြစ်လည်း အသိသာကြီး :)))
တကယ်တော့ အဲဒီဒိတ်ရောက်တိုင်း စားလို့ မကောင်းတော့တာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ တကယ်က Expire ဆိုတာ စားသုံးရန် မသင့်တာပါ။
စားရင်တော့ စားလို့ရပါသေးတယ်။ အဓိက က ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပါပဲ။
ဖြစ်တက်ပါတယ် ........ လူ့စိတ်ဆိုတာ ဆန်းကျယ်တယ်လေ ...... ဒါ့ကြောင့် လည်း ချစ်တာ တွေ မုန်းတာတွေ ကြိုက်တာတွေ မကြိုက်တာတွေ ဖြစ်နေရတာပေါ့ ဟိဟိ
း) မက်ဂီတွေချည်းလွတ်မကြိတ်နဲ့ဗျ ဆံပင်တွေဖြူလာလိမ့်မယ်
စိတ်က တကယ်ပဲ ဆန်းကြယ်တာ...လိုက်လို့ကို မမီနိူင်ဘူး....:)
စိတ်.. စိတ် .. ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ..
စိတ်က အာရုံကတဆင့် အတွေးတွေပေါ်မှာ အခြေခံတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ အတွေးတွေကြောင့် စိတ်က ခုတစ်မျိုး တော်ကြာ တစ်မျိုး ဖြစ်ဖြစ်နေတာပေါ့...
ရေးပဲ ရေးတတ်နိုင်လွန်း... :)
စိတ်စိတ်.. စိတ်ကလည်း ခက်ပါတယ်...
ဘာမှတော့ မဆိုင်ဘူးလားမသိဘူး.. ၀င်ပွားသွား၏
ကိုဏီ ကျွန်တော် ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူးး)
ကေအယ်ကိုလာခဲ့ အဆင်ပြေမှုတွေ ချည်းပဲတွေ့သွားစေရမယ်။
ရေအေးစက်လေးမှ ရေပူခလုပ်ကိုဖွင့်ရင်း ဘူးထဲမှခေါက် ဆွဲခြောက်များကို နှစ်ခါဆေးမိ၏။ နောက်... အရသာအထုတ် လေးကိုဖောက်ထည့်ရင်း ဘူးထဲမှာအသင့်ပါသည့် ကော်ခက် ရင်းလေးနှင့် မွှေနှောက်ကာအဖုံး ပြန်ပိတ်၊ သုံးမိနစ်လောက် သူ စောင့်.......။
နောက်တော့ ပူပူနွေးနွေး ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကို မစားသေးဘဲ ထိုင်ငေးနေတုန်း.. ညီလေးတစ်ယောက်ကရောက်လာ.. ခေါက်ဆွဲထုတ်က expire ဖြစ်နေတာကိုထောက်ပြ။
အဲ့ချိန်မှာ ဗိုက်ကဆာ.. ခေါက်ဆွဲပြုတ်နံ့က တစ်ခန်းလုံးသင်းပျံ...
expire ဖြစ်နေတာကို သိသိနဲ့.. တစ်ဇွန်းလောက်ဖြစ်ဖြစ် ဆက်မြည်းမလား..
နောက်ဆုံးစားသုံးသင့်တဲ့ရက်ဆိုတာ အရသာကောင်းခြင်း မကောင်းခြင်းနဲ့ မဆိုင်ဘူးလေ ကိုဏီ...
မမြင်နိုင်တဲ့ ဓာတ်သဘောတွေနဲ့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ စားစရာမို့ မမြင်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေက ပိုပြီးကြီးထွားလာနိုင်တာမို့ မစားသင့်တော့ဘူး ပြောတာပါ။
အမှန်က ပိုက်ဆံယူပြီး ရောင်းစားတဲ့ စက်ပိုင်ရှင်က နေ့စွဲလွန်နေတဲ့ စားစရာတွေကို တာဝန်သိသိနဲ့ ဖယ်ရှားသင့်တာပါ။
စားသုံးသူမှာ ပိုက်ဆံလည်း ကုန်သွားသေး.. လွှင့်လည်းပစ်လိုက်ရသေးဆိုတော့ မနစ်နာလွန်းဘူးလား...
(ဆိုလိုရင်းနဲ့ လွဲပြီး ပြောချင်တာတွေ ပြောသွားတာကိုတော့ ဆောရီးဗျာ...)
ညီလေးလာပြောတဲ့ စကားကို မျက်စိမှိတ်ပြီး ဆက်စားလိုက်ရမှာ
အဲလေ နားပိတ်ပြီးတော့စားလိုက်ရမှာ အဟိ
တစ်ခါ တစ်လေ အဲ့လို ပဲ ..
အဆင်မပြေဘူးးး ဆိုတဲ့ နေ့ဆိုရင်
မနက်ကနေ ညနေ ဘာတွေ လွှဲနေမှန်းကို
ဟူးးးးးးးးးး ..... !!!1
တို့တတွေတော့ မလေးရှားမှာ မှိုတက်တဲ့ ပေါင်မုန့်တွေ ရောင်းခဲ့ရတာပါပဲ။
ကိုယ်ရောင်းချင်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ သွတ်ထားတဲ့ယိုကနေ အထဲမှာတက်နေတာ ဝယ်စားတဲ့လူလာပြောမှသိရတာလေ။
ပေါင်မုန့်ပို့တဲ့ကုလားလာတော့ လဲသွားပေးတာ မှိုတက်တွေထပ်ပါနေလို့ ဖေါက်သည်ဖျက်လိုက်ရတယ်။
ကောင်းလိုက်တာ... ခံစားချက်လေးတွေ ရင်ထဲကို ဖြတ်ပြေးသွားတယ်....
ဖတ်လိုက်ရတာ စိတ်မကောင်း ပါဘူး ဒါကြောင့် သူများက ဟင်းချက် ချက် ကြွေးနေရတာပေါ့ များများလာစားနော်
စတာနော် ကိုဏီ ပျော်သွားအောင်လို့
ကျွန်တော် ဆို ဆာဆာနဲ့ ကုန်အောင် ကြိတ်ပစ်မှာပဲ...။
ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ကိုဏီရေ။ မြန်မာဆိုင်လေးတွေမှာ မြန်မာအစားအစာလေးတွေရနေလို့ တော်သေးတာပေါ့။ ညီမကတော့ လက်ဖက်သုတ်တို့ ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်တို့နဲ့ နှစ်ပါးသွားနေရတာကြာပြီ။
ငါဆိုရင် တော့ မျက်စိကြီးပြူးပြီး... ဟယ်တော်.... ဘိုက်ထဲရောက်ကုန်ပြီ... ထူးပါဘူးကွားဆိုပြီး...... ဟိုအဖတ်လေးပဲလတ်ဆတ်သလိုလို ဒီဘက်က အရည်လေးပဲ ပိုကောင်းသလိုလိုနဲ့ တစစီရွေးစားပြီး..နောက်ဆုံးအကုန်တီးပလိုက်မယ်... ဟီးဟီး... ဘိုက်ဆာပါတယ်ဆိုမှ.... ဟွမ်း.. စိတ်ကြီးတယ်....
ကျွန်တော်လည်း meggi နဲ့နှစ်ပါးသွားနေတာ နှစ်ပတ်ကျော်ပီ ဟင်းတော့ကောင်းကောင်းချက်တတ်တယ်ဗျာ ကြုံမှချက်ကျွေးမယ်.. ဘယ်နဲ့လဲ.......
အစ်ကိုဗျာ စိတ်မကောင်းဖြစ်အောင် အရမ်းလုပ်တယ်နော် ...
ဒီလိုလုပ်ပါလား .. အစ်ကို ညဟင်းချက်ရင် ပိုချက်ပြီး မနက် ထမင်းချိုင့်ထည့်သွားလေ ... အစာပြေပေါ့ ... အိမ်ရောက်မှ
ငါ့အစ်ကိုကြီး မိန်းမပေးစားမှ ဖြစ်တော့မယ် ...
ဒီညီလေးက ကြည့်မနေနိုင်တော့ဘူး ... ဒါပဲ .. ကလေးစကားနားထောင်ရမယ် ...း)